राेल्पालीकाे सुरक्षा गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएकाे छः प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेशराज सुवेदी – रोल्पा समाचार
२०७७ कार्तिक २२, शनिबार १४:५५ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७७ कार्तिक २२, शनिबार १४:५५ गते
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सन्त्रासकै बीच नागरिकले दैनिक जीवन बिताउँदै आएका छन् । भाइरसकै कारण मानवीय जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । नागरिकलाई भाइरसबाट बच्न ढोका बन्द गरेर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यतिबेला भाइरसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दा अन्य मानवीय क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । नागरिकले सहज रुपमा आयआर्जनको वातावरण नहुँदा दैनिक जीवनयापन कठिन भएको छ । विभिन्न ठाउँमा चोरीका कार्यहरु पनि बढेका छन् । बैंक, लघु वित्तिय, व्यक्तिगत ऋण फिर्ताको दबाबले धेरै नागरिकहरु मानसिक तनावमा छन् भने केही व्यक्तिहरु त यसकै कारण आत्महत्या पनि गरिहेको अवस्थामा यस जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अवस्था, चोरीको अवस्था, आत्महत्याको अवस्था, आत्महत्याको कारण, महिला हिंसाको अवस्था, मदिरा नियन्त्रण, कोरोनाको समयमा सुरक्षाकर्मीको अवस्था लगायतका विषयवस्तुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीसँग रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
हवस् धन्यवाद ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्ने काममा नै व्यस्त छुु । नागरिकका गुनासा सुन्ने, समाधान गर्ने, मातहत इकाईहरुलाई निर्देशन दिने, प्रहरी परिचालन तथा अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने काममा नै दैनिक गतिविधिहरु चलिरहेका छन् । त्यसका अलवा योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, तालुक कार्यालयहरुबाट आएका निर्देशनहरु पालना गर्ने, गराउने काम गरिरहेको छुु ।
 रोल्पा बसाईको कस्तो अनुभुति गर्नु भएको छ ?
रोल्पामा आएर काम गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छुु । यहाँका नागरिकहरुको व्यवहार अत्यन्त राम्रो छ । प्रहरीले पनि नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहमा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन । नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने काममा गैह्र व्यवसायिक क्रियाकलाप प्रहरीले देखाउनु हुँदैन ।
 जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरुले यो समयमा कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै छन् ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहत इकाईहरु सबै जिल्लाको समस्त सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन नै लागि रहेका छन् । त्यसका अलवा जिल्ला भर बालबिवाह विरुद्धका चेतनामूलक कामहरु पनि सबै इकाईहरुले गरिरहेका छन् । महिला हिंसा, लैगिंक हिंसा तथा घरेलु हिंसा विरुद्धका चेतनामूलक कामहरु विभिन्न इकाईहरुबाट भइरहेको छ । प्रहरीहरु रचनात्मक तवरले नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
 कोरोना भाइरसको संक्रमितको उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा कसरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु भएको छ ?
अहिले कोरोनाको प्रभाव सबै क्षेत्रमा छ । प्रहरी कर्मचारीहरु पनि केही मात्रामा कोरोनाको कारण प्रभावित भएका छन् । तरपनि हामीले नागरिकको सेवामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौं । स्वास्थ्य प्रोटोकललाई प्रहरीले पुर्ण रुपमा पालना गरेको भने नागरिकले पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पुर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ भनेर प्रहरीले कडाई गरिरहेको छ । सामाजिक दुरी कायम राख्ने, मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नागरिहरुसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न चेतनामूलक काम पनि प्रहरीले गर्दै आएको छ । सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रु तथा सवारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर प्रहरीले विशेष कडाई गरिरहेको छ ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धि बताइदिनुस् न ?
समग्र रुपमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ । सुरक्षालाई मजबुत बनाउन अझ प्रभावकारी रुपमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ । Pro Active Policing मा अझै जोड दिनुपर्छ । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रहरीको उपस्थितिलाई अझै बढाउँदै लैजानु पर्छ । नागरिक प्रहरीको सहकार्य तथा समन्वयलाई अझ बढाउनु पर्छ ।
 पछिल्लो समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सफलताहरु के–के हुन् ?
रुन्टीगढी गाउँपालिकामा भएको हत्यामा संलग्न मानिसहरुलाई २४ घण्टाभित्रै पक्राउ गरिएको, सुलिचौरमा IME बाट पैसा झिक्ने क्रममा चोरी भएको रु १ लाख १८ हजार रुपैया सहित मानिसलाई २ घण्टाभित्रै पक्राउ गरिएको, विभिन्न मुद्वामा फरार भएका २५ जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि कानुनी दायरामा ल्याईएको, यो आर्थिक वर्षमा घटेका विभिन्न घटनाहरुमा ५३ जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि कारवाही गरिएको, लिबाङ बजारमा हो–हल्ला गर्दै हिड्ने ३८ जना किशोरहरुलाई नियन्त्रमा लिई कारवाही गरिएको, त्रिवेणी गा.पा.मा हुनै लागेको २ वटा बालबिवाह प्रहरीको सक्रियतामा रोकिएको, ग्रामीण एरीयामा गस्ती बढाईएको छ । त्यस्तै गरि यस बिचमा प्रहरीको आन्तरीक व्यवस्थापनमा ध्यान दिई प्रहरी जनशक्तिलाई घुम्ती प्रशिक्षण तालिम, आचरण सम्बन्धि अनुशिक्षण तालिमहरु पनि दिई पुर्नताजगी गराईएको छ ।
 पछिल्लो समयमा चोरीका घटनाहरु नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय असफल भएको नागरिकले गुनासो गर्दै आएका छन्, नि ?
यो भनाईमा म सहमत छैन । अनुसन्धान प्रक्रियामा केही समय लाग्ला छुट्टै कुरा हो । तर, हामी सफल भएका छांै । सुलिचौरमा क्ष्ःभ् बाट पैसा झिक्ने क्रममा चोरी भएको रु १ लाख १८ हजार रुपैया सहित मानिसलाई २ घण्टाभित्रमै पक्राउ परेको छ । चोरीको घटना नियन्त्रणमा हामी सक्रिय पूर्वक लागि रहेका छौं ।
 चाडपर्व र अन्य समयमा घटना घटेको अवस्थामा पीडितहरुले सुरक्षा निकायमा कुन–कुन माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्छन् ?
हामीलाई सम्पर्क गर्ने विभिन्न माध्यमहरु छन् । १०० मा नि.शुल्क फोन गरेर गुनासो राख्न सकिन्छ । त्यसै गरी कार्यालयको फोन नं.०८६–४४०११३, कन्ट्रोल रुमको फोन नं.९८५७८५२५५५, र डि.अ. रुमको फोन नं.९८५७८२२८५५, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको फोन नं.९८५७८२५५५५ मा फोन गरेर गुनासो टिपाउन सकिन्छ । यसका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको फेसबुक पेज मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
शान्ति सुरक्षा कायममा सुरक्षा निकायको सुरक्षा समयन्त्र नै कमजोर भएको नागरिकको गुनासो वास्तविकता हो ?
शान्ति सुरक्षा कायम राख्न जिल्लामा सुरक्षा सम्यन्त्र कमजोर रहेको भन्ने नागरिकको गुनासोमा कुनै सत्यता छैन । सुरक्षा सम्यत्र बलियो छ । काम गर्न प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च रहेको छ ।
आत्महत्याको अवस्था जिल्लामा कस्तो छ ?
यस जिल्लामा जिल्लामा आत्महत्या गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा उस्तै उस्तै छ । आत्महत्या गर्नेमा महिलाको तुलनामा पुरुषको बढि छ । १६–२५ वर्ष उमेर समूहमा आत्महत्या बढि देखिन्छ । लकडाउनको समयमा जेठ र असार महिनामा तुलनात्मक रुपमा आत्महत्या बढि देखिन्छ । यो समयमा पनि आत्महत्या गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढि छ । चालु आ.व.मा २२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
अध्ययनले कुन–कुन कारणले आत्महत्याका घटेका छन् ?
आत्म विश्वासमा कमी, आर्थिक स्थिति कमजोर, शिक्षा तथा चेतनाको अभाव, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, तनावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, लगातारको असफलता डिप्रेशन आदी नै आत्महत्याका कारणहरु देखिन्छन् ।
कोरोनाको सन्त्रासको अवस्थामा लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालित सवारी साधनमा सरकारको नीतिभन्दा बढि यात्रु व्यवसायीले राखे पनि सुरक्षा निकायले आँखा चिम्लिएर बसेको नागरिकको गुनासो छ, नि ?
अहिले त सिट क्षमता अनुसार यात्रुहरु राखेर सवारी चलाउन पाइन्छ । गाडीको सरसफाई, ढोकामा नै स्यानीटाइजर राख्नु पर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ । लापरवाही गर्नेलाई कारवाही पनि गरिएको छ । नागरिकको सुरक्षामा असर पर्ने कुरामा प्रहरी कहिल्यै पनि आँखा चिम्लेर बस्दैन ।
सुरक्षाकर्मीबाट कोरोना सम्बन्धि जारी स्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्यनमा वेवास्ता किन ?
कानूनको कार्यान्यन गराउने नेपाल सरकारको आधिकारीक निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो नै हो । कोरोना सम्बन्धि सुरक्षा मापदण्ड प्रहरी कर्मचारीले पनि पालना गर्छ भने नागरिकहरुले पनि पुर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवारी निकायबाट नै स्वास्थ्य मापदण्डको वेवास्ताले नागरिकमा कस्तो असर परेको छ ?
कुन जिम्मेवार निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैन, मैले बुझिन । तर, कोरोना सम्बन्धि सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्नु सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी आम नागरिक सबैको कर्तव्य हो ।
भाइरसको सन्त्रासको समयमा घरेलु हिंसाको अवास्था बारे बताई दिनुहोस् न ?
घरेलु हिंसाको घटनाहरुको उजुरी प्रहरी कहाँ आइरहेका छन् । तर, जे जति उजुरी आएका छन् । त्यति मात्रै घटना होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । अझ धेरै घटनाहरु गाउँ समाजमा नै लुकेर बसेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण के–के हुन् ?
अशिक्षा, गरिवी, बढ््दो महत्वकाङ्क्षा, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, चेतनाको कमी, परम्परागत मान्यताहरु नै घरेलु हिंसाका कारणहरु हुन जस्तो लाग्छ ।
 चाडपर्वको समयमा इजाट तथा घरेलु मदिरा नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ ?
मदिरा सेवन गरेर सवारी साधन चलाउनेलाई, मदिरा सेवन गरी हो–हल्ला गर्नेलाई कारवाही गरिएको छ । उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई मदिरा जन्य पदार्थहरु किन्न आए पनि दिन हँुदैन ।
सुरक्षाकर्मी नै मदिरा सेवन गरी ड्युटीमा खटिन्छन् किन ?
मदिरा सेवन गरी ड्युटीमा गएका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारवाही हुन्छ । मदिरा सेवन गरेर ड्युटीमा जान कडाई गरिएको छ । नियमित चेक जाँच पनि भइरहेको छ ।
गैर कानुनी रुपमा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमाको चेक पोष्टहरुमा सवारी साधनको चेक जाँचको नाममा शुल्क असुलेको व्यसायीको गुनाँसो छ, नि ?
सवारी साधन चेक जाँचको क्रममा शुल्क उठाई गैर व्यवसायिक चरित्र देखाउने प्रहरी कर्मचारीलाई कडा विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यस्तो गैर व्यवसायिक कार्य कसैबाट भयो भने मलाई पनि जानकारी गराईदिनु हुन म व्यवसायिहरुलाई म अनुरोध गर्दछु । गलत कामगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दछु ।
 भनसुनकै आधारमा गैर कानुनी सवारी साधन र चालकहरुलाई छाड्ने क्रम बढेको अवस्थामा छुट दिनै पर्ने हो भने त कि सवारी साधन चेक जाँच किन गर्नु प¥यो ?
भनसुनको आधारमा गलत काम गर्ने मान्छे कोही पनि छुटदैनन् । भनसुनको भरमा कसैले गरेको गलत कार्यलाई माफी दिन सकिदैन ।
यस्ता गैर कानुनी कार्यलाई निरुत्साहितका लागि हजुरबाट अब कस्तो पहल गर्नु हुन्छ ?
प्रहरी कर्माचारीहरुले पनि तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर मात्र कानुनको कार्यन्वयन गराउने हो । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न प्रहरीलाई छुट हुँदैन । गैर व्यवसायिक कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारवाही गरिनेछ भने गलत काम गर्ने जो सुकै व्यक्तिलाई पनि उसले गरेको गल्तीको आधारमा कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गरिने छ । कुनै पनि गलत कार्यमा सम्झौता गर्न सकिदैन । अपराधमा विवेकपुर्ण कानुनी कठोरता अपनाई कार्य गरिने छ ।
धेरै जना जिल्लाबासीहरु लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न प्रहरी नियन्त्रणमा आउँछन् । तर, प्रमुख व्यापारी अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ?
लागु औषधको कारोवार एवम् संगठित अपराध हो । लागु औषधका कारोवारीहरुले आफु बाहेक अरुको संलग्नता खुलाउनै चाहादैनन् । त्यसैले प्रमुख व्यापारीलाई प्रक्राउ गर्ने कठिनाई हुने गर्छ । गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रमुख व्यापारी पनि प्रक्राउ पर्दछन् । तर, अलि समय लाग्छ ।
 यस जिल्लाबासीहरु लागु औषध ओसारपसारमा संलग्न हुनुको प्रमुख कारण के हो ?
आर्थिक गरिवी र चेतनाको कमी नै हो जस्तो लाग्छ । लागु औषधको कारोबारबाट छोटो समय र कम मेहनतबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने लोभले नै ग्रामीण एरियाका इमान्दार मानिसहरु भरियाको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता गैर कानुनी कार्यमा संलग्न रोक्नका सुरक्षा निकायबाट पहल भएका छन कि छैनन् ?
लागु औषधको उत्पादन बिक्रि वितरण सबै गैर कानुनी काम भएकोले यसमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गरिन्छ । सुरक्षा निकायबाट लागु औषधको खेतीलाई नष्ट गर्ने, कारवाही गर्ने संलग्नलाई कानूनी कारवाही गर्ने लगायत लागु औषध विरुद्ध चेतनामूलक कार्यहरु पनि भएका छन् । स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई पनि समय–समयमा लागु औषध विरुद्ध प्रशिक्षित गराइएको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायमका लागि आगामी कस्तो योजना तय गर्नु भएको छ ?
प्रभावकारी प्रहरी परिचालन एक अर्का बीच सहकार्य र समन्वय नै सुरक्षाको महत्वपुर्ण आधार हो । नागरिकको सुरक्षा समुदायको विश्वास अभिवृद्धि पेशागत क्षमताको विकास गर्दै प्रभावकारी जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य भएकोले यिनै लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी काम कारवाही गरिने छ । प्रहरी कर्मचारीहरुलाई घुुम्ती प्रशिक्षण तालिम, आचरण व्यवहार सम्बन्धि तालिमहरु प्रदान गरिएको छ । Pro Active Policing मा जोड दिइने छ ।
 जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायहरु सहित जिल्लाबासीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलै सबैतिर जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रहरीलाई काम गर्न पनि धेरै सजिलो भएको छ । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अन्य सरोकालवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडी बढ्नका लागि अनुरोध गर्दछु । सबैको सहकार्य र समन्वयले नै सुरक्षा पहिलो आधार हो । त्सैले अपराधमा कुनै सम्झौता नगरीकन समाजमा हुने गलत प्रवृत्ति, अपराध र गलत कार्यका बारे छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समक्ष उजुरी गर्न अनुरोध गर्दछु । गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई कारवाही गरी सुधार गर्ने कार्यमा सबैको सकारात्मक र रचनात्मक पहल होस् भन्न चाहन्छ ।
अन्तिममा केही कुरा छुटेका छन् कि ?
सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति आफै स्वंयम हो । उदाहरणको लागि घरको ताल्चा बलियो नलगाउदा चोरी हुन सक्छ । हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भएको अवस्थामा ज्यान जान सक्छ, माद पदार्थ (रक्सी) सेवन गरि सवारी चलाउँदा दुर्घटना भई क्षति पुग्न सक्छ । सामाजिक दुरी कायम नराखी भिडभाडमा जाँदा कोरोना भाईरसले आक्रमा गर्न सक्छ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा आफ्नो पनि क्षति हुन सक्छ । त्यसैले सुरक्षामा व्यक्ति स्वंय आफै पहिलो जिम्मेवार बनेर काम गर्नु पर्दछ । कानुनले नगर भनेको कुरा कसैले गर्नु हुँदैन, त्यो अपराध हो । त्यसैगरि अहिले चाडपर्वको समय छ । कोरोना भाईरसको कारणले गर्दा भिडभाड नगर्ने, सामाजिक दुरी कायम राख्ने, कुनै मेला पर्व आयोजना नगर्ने, देउँसी भैलो नखेल्ने, सावुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, स्यानिटाईजरको प्रयोग गर्ने बानी बसाली कोरोनाबाट आफु पनि बच्ने र अरुलाई पनी बचाउने कार्यमा लाग्नु हुन सबैमा विशेष अनुरोध गर्दछु ।